Abakhiqizi & Abakhiqizi bama-Metal RFID Keyfobs China
Amakhadi e-RFID Chip
Amakhadi we-CPU Smart
Ikhadi le-Wood RFID
Amakhadi e-RFID amathikithi
Ukuphrinta Amakhadi we-PVC
Amakhadi we-PVC Keytag
Amakhadi Okuvimbela we-RFID
Wonke ama-Silicone Wristbands
Zonke Izindwangu Zendwangu
Zonke Izikhwama Zephepha
Zonke Izihlakala ze-Thermal
Zonke Izihlakala Zepulasitiki yeVinyl
Ama-Keyfobs we-ABS RFID
I-Epoxy RFID Keyfobs
Pff Keyfobs PVC RFID
Okwakhiwe ngaphezulu kwePF RFID Keyfobs
I-Glassfiber RFID Keyfobs
I-Metal RFID Keyfobs
Isikhumba KeyFobs zesikhumba
I-MIFARE Classic Card
MIFARE I-Ultralight Card
IMIFARE DESFire Card
Ikhadi le-MIFARE Plus
Amakhadi we-UHF RFID
Ikhadi Lomndeni le-EM
Ikhadi le-EV RFID
Ikhadi le-UHF RFID
I-KMT01 RFID keyfob
I-HUAYUAN I-RFID yensimbi engu-Keytag KMT01 ihlanganisa ubuchwepheshe be-RFID kanye ne-ergonomic eyakhiwe eyakhiwe ngamandla epulasitiki ye-ABS. Uhlaka lwensimbi esezingeni eliphakeme elizungeze ukhiye wemfashini, izindlu eziqeda matte zenza ukhiye we-RFID fob yokunethezeka futhi zikwenze ube okujwayelekile.
I-logo yangokwezifiso nenombolo ye-ID kuyaphawuleka kuzinhlangothi zombili zefransi yekhiye we-RFID. Kusetshenziswe kahle i-E-Payment, ukuhamba kwesikhathi, uhlelo lokuthembeka, ukulawulwa kokufinyelela, ukukhonjwa, ukuphathwa kwamalungu e-VIP, nezinye izindawo zokungcebeleka, njll.
Kutholakala ama-Dual RFID frequency chips. Okufana ne-LF + HF, HF + UHF, njll.
I-KMT02 RFID keyfob
I-HUAYUAN Durable RFID iron Keytag KMT02 yakhiwa ngezindlu zepulasitiki zensimbi ne-ergonomic eziklanywe ngamandla ze-ABS. Idizayini ehlanganisiwe yenza i-RFID yensimbi yokhiye ihlale isikhathi eside.
I-KMT03 RFID keyfob
IHUAYUAN edume nge-RFID keyfob KMT03 yakhiwe izindlu ze-ergonomic eziklanywe ngamandla zebhizinisi leplastiki le-ABS. Umklamo ohlanganisiwe we-Robust wenza ukhiye we-RFID okunethezeka futhi akwenze ube ngokwejwayelekile. I-silk-screen logo noma i-logo ye-laser, inombolo kamazisi ezinhlangothini zombili iyatholakala.
I-KMT04 RFID keyfob
Ukhiye we-RFID wensimbi oqinile u-KMT04 unobuchwepheshe obuningi be-RFID, ukusuka kumvamisa ophansi we-125KHz kuya kumvamisa ophakeme we-13.56MHz, ohlinzeka ngesisombululo esihle kakhulu sezicelo ezihlukile ze-RFID.
I-KMT09 RFID keyfob
I-KMT09 ihlanganisa ubuchwepheshe be-RFID nezindlu eziqinile zepulasitiki nge-epoxy evikelekile ecwebezelayo kanye nomphetho wensimbi. Umsebenzi wobuciko obugcwele be-CMYK nenombolo kamazisi kuyaphrintwa zombili izinhlangothi ze-RFID key fob.
I-KMT07 RFID keyfob
Ukhiye obalulekile we-RFID we-RFID wakhiwe ezindlini zepulasitiki ezinzima ze-ABS. Ukhiye wensimbi osezingeni eliphakeme. Namathisela okuncane endaweni engukhiye. I-chip ye-frequency ye-LF, HF noma ye-UHF iyatholakala.
I-KMT08 RFID keyfob
Ithegi yensimbi ye-KMT08 RFID yakhiwe ngezindlu eziqinile zepulasitiki ze-ABS nokuxhumeka kwensimbi nge-keyring. Lesi simo se-keyFob yokunethezeka ebangeni eliphakeme sinikeza ukuphathwa kwe-ergonomic kumsebenzisi.
I-KMT10 RFID keyfob
I-HUAYUAN KMT10 i-key -ag RFID yensimbi enhle eyakhiwe ngezindlu zepulasitiki eziqinile ze-ABS ngokuvikelwa okucwebezelayo kanye nensimbi. Ingxenye ye-House themed ixhumeke ochungechungeni ngamabhele, iyaphenduka, yinhle. I-logo yangokwezifiso, inombolo ye-ID, kanye nekhodi ye-QR kuyaphrintwa kuzinhlangothi zombili zefriji yensimbi ye-RFID.
I-KMT11 RFID keyfob
IHUAYUAN KMT11 RFID key fob yensimbi yakhiwa ngezindlu ezinamandla zepulasitiki ezinokuvikela okucwebezelayo kanye nomphetho wensimbi. Ubuciko obuhle nobushelelezi be-CMYK egcwele zombili izinhlangothi ukuze kukwenze ungajwayelekile.
I-KMT12 RFID keyfob
I-KMT12 RFID keyfob yakhiwe nge-RFID transponder, ithegi ye-epoxy ecwebezelayo ngomphetho wensimbi. Ukuphrinta okwenziwe ngemibala egcwele umbala wobuciko. Inombolo ye-ID eguqukayo ingaphrintwa zombili izinhlangothi ze-RFID metal keytag Ama-chip e-frequency RFID chip ayatholakala. Okufana ne-LF + HF, HF + UHF, njll.
I-KMT05 RFID keyfob
IHUAYUAN I-RFID yensimbi engu-Keytag KMT05 yakhiwe ngezindlu zepulasitiki ezinamandla nezensimbi ze-ABS. Ingxenye ye-House themed ixhumeke ochungechungeni ngama-bearings, i-rotatable, yenza ukhiye we-RFID fob yokunethezeka futhi ikwenze ube okujwayelekile. I-logo yangokwezifiso nenombolo ye-ID kuyaphawuleka kuzinhlangothi zombili zefransi yekhiye we-RFID.
I-KMT06 RFID keyfob
I-compact, elula, futhi iphephile, le fob yokuqina engaxhunyiwe ye-KMT06 RFID inikezela ukulawulwa kokufinyelela ngekhono lokungena kalula kwindandatho yokhiye. I-logo ye-Laser nenombolo ye-ID kuzo zombili izinhlangothi ze-RFID keytag.
IShanghai HuaYuan Electronic Co, Ltd.
Ucingo: + 86-18016404655
UCel: + 86- (0) 21-54246151
© Copyright - 2010-2021: Wonke Amalungelo Agodliwe. Amathiphu - Imikhiqizo - Sitemap - AMP
Id Rfid Tag Keyfob , RFID Key Tags , Epoxy Nfc Keyfob , 125khz Rfid Tag Tag , Isikhiye sefrokhi , Epoxy Rfid Tag ,